Fahfaahin ku saabsan Khasaaraha Qaraxii ka dhacay Muqdisho | Keydmedia
Fahfaahin ku saabsan Khasaaraha Qaraxii ka dhacay Muqdisho
Gaari oo ahaa nooca aan xabada karin, ayaa goobta ku burburay kadib markii qarax miino ay ku haleeshay wadada ku taalla agagaarka Jidka C/qaasim.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxa saakay abaare 10:00 A.M. ka dhacay gudaha Muqdisho, kaasoo noqonaya weerarkii labaad oo tobaadka Al-Shabaab ka fuliso magaaladda.
Illo ku dhaw booliska ayaa u sheegay Keymedia Online in qaraxa ay ku dhinteen labo askari, kuwaasoo la socday gaariga la weeraray. Gaadiidka gurmadka ee Ambalaaska ayaa goobta kasoo qaadey dhowr qof oo dhaawacmay, oo shacab ay kamid yihiin, waxaana la dhigay Isbitaal.
Khasaaraha dhimashada ayaa laga yaabaa inay intaasi ka badato, maadaama wali aysana Saraakiisha amniga ka hadlin qaraxa, kaasoo mas'uuliyadiisu ay sheegatay Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda iyo AMISOM.
Sabtidii lasoo dhaafay, gaari lagu soo xiray walxaha qarxa ayaa lagu dhuftay bar-koonatarool oo Ciidanka dowladda ka ilaaliyaan Dekadda Muqdisho, waxaana halkaasi ku dhaawacmay in ka badan 7 qof, oo Askar iyo shacab isagu jira.